Indlu encinane e Žítková
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguHana
Indlu yothando kwindawo ezolileyo yelali iŽítková ejikelezwe yihektare yamadlelo entaba. Indawo efanelekileyo yokujonga iKopanice.
I-cottage inikwe kwisitayela selizwe. Ngaphakathi uya kufumana igumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yomlilo, itafile enkulu kunye nebhedi yesofa kabini, igumbi lokulala elineebhedi ezimbini, igumbi lokuhlambela elinendlu yangasese kunye nekhitshi elixhotyiswe. I-cottage itshiswa yindawo entsha yomlilo, kukho umbane kunye namanzi ashushu. Ngaphambi kwendlu kukho i-terrace elungele i-barbecues.
Siyilungisile i-cottage ukuze kube lula ukuhlala apha, kodwa ngenxa yendawo inezinto zayo. Akukho uxhumano lwe-Wi-fi kunye ne-intanethi kwi-mobile iyacotha - kuya kufuneka uthethe omnye nomnye :) Ukuba ufuna ukukhukula, uya kufumana umthi osele ulungele isitofu kwi-shed. Zintsha kwaye ziya kutshisa indlu ngephanyazo. Ikhitshi linefriji, isitovu sombane, i-oveni endala kunye nomatshini wekofu weDeLonghi, owenza iespresso enkulu. Sinezithako ezisisiseko ezifana nekofu, iti, ityuwa, ipepile, ioli, izinongo. Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngeshawari, isinki kunye nendlu yangasese eyahlukileyo yendalo.
I-cottage yakhiwe kwithambeka, kodwa kwindawo yayo ekufutshane, umhlaba usezingeni kwaye ugcwele i-lawn egcinwe kakuhle. Ungayikhwela nangepram. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuhamba umgama omde ngepram, kufuneka woyise i-500 m ubude, indlela enyukayo yehlathi ekhokelela kwindlela egangathiweyo. Ke ngoko, sicebisa umthwali wosana kunepram kwiindwendwe ezinabantwana abancinci.
Indlu ikwithafa elikufutshane nehlathi. Kwimozulu entle, ungapaka kanye ecaleni kwendlwana. Ebusika okanye emvuleni kukhuselekile ukumisa i-500m ukusuka kwindlu, ekupheleni kwendlela egangathiweyo. Kude kude nendlu kukho i-cottage yothixokazi odumileyo u-Žítkov, ukusuka kwabanye abamelwane ungathenga itshizi yegusha entsha, i-bryndza kunye namaqanda. Indawo ejikelezileyo igcwele iindawo ezinomdla zohambo.
Umbuki zindwendwe ngu- Hana
Sihlala e-Uherské Hradiště, ngoko asiyi kuba kwi-cottage ngexesha lokuhlala kwakho. Ungafowuna nangaliphi na ixesha ukuba kukho nantoni na oyifunayo.